Posted By: KongoLisolowaa: Diisambar 30, 2017 00: 10 No Comments
"Dooddu way furantahay! "
Sonkorta iyo cusbada waa la isku dari karaa, laakiin quraanyada ayaa diida cusbada waxayna qaataan kaliya sonkorta, taasi waa, dooro dadka ku habboon nolosha oo noloshaada ka dhig mid fiican oo macaan.
- Haddii aad ku guuldareysato inaad ogaato riyadaada, bedel adiga jidka, ma aha Ilaahaaga, laakiin xusuusnow in geeduhu baddalo caleemo, oo aan xididadooda ahayn.
- Weligaa ma gaari doontid halkaad u socotid haddii aad joojiso oo aad dhagxin ku tuurto eey kasta oo duufsanaya. sheeg kuwa ku neceb ayaa arki doona inaad ku dul soconaysid biyaha oo waxay dhihi kartaa maxaa yeelay adigu ma awoodid dabaasha iyo xataa hadaad ku dul dul booddo biyaha, cadaawayaashaadu waxay kugu ashtakayn doonaan ciida.
- Ka dhig hamigaaga inaad ku noolaato nolol deggan, oo aad ku barato meheraddaada oo aad keligaa ku shaqeyso oo aad xusuusato, "waligaa ha la diririn doofaarka" maxaa yeelay labadiinaba waxaad noqon doontaan wasaq, laakiin doofaarka l 'maqsuud.
Ruushku wuxuu ku guuleystay inuu soo celiyo xiriirka koowaad ee satellite-ka isgaarsiinta Angolan, Angosat-1 ... Xiriirka mashiinka ayaa lumay 27 December 2017
Sep30 04: 13